Kismaayo News » Jawaari oo Garoowe gaaray
Jawaari oo Garoowe gaaray
Kn: Gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ka degay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland.
Waa markii koobaad ee Jawaari booqdo maamul goboleedka Puntland tan iyo intii xilka uu labada jeer ku soo noqday loo magacaabay shan sano ka hor. Socdaalka waxaa ku weheliyay xubno ka socda labada gole ee baarlamaanka iyo aqalka sare.
Socdaalka gudoomiyaha Jawaari iyo waftida uu hogaaminayo ayaa lagu macneeyay inay ceelalyo u yihiin xalinta khilaafka iyo is maandhaafka ka dhex aloosan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ka hor inta aan 28ka bishan la isugu tagin Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Cabdiwali M. Gaas ayaa ah gudoomiyaha gole ay dhawaan Kismaayo ku samaysteen maamul goboleedyadu.
Sidoo kale waxaa qorshaha ku Jira in baarlamaanka Puntland lagala xaajoodo inay dib u eegis ku sameeyaan qodobo ku jira dastuurka Puntland oo u muuqda inaysan la saanqaadi karin dastuurka qabyo qoraal ee dawladda federaalka Soomaaliya.